गल्कोट नगरपालिकाको मेयर/उपमेयरमा भरत गैरे र रेनुका काउचा निर्वाचित – ebaglung.com
गल्कोट नगरपालिकाको मेयर/उपमेयरमा भरत गैरे र रेनुका काउचा निर्वाचित
२०७४ जेष्ठ ३, बुधबार १२:५५	Home Slider, थप समाचार
बालकृष्ण सुवेदी, गल्कोट २०७४ जेठ ३ । गलकोट नगरपालिकामा नेपाली काँग्रसको तर्फबाट नगर प्रमुख पदका उमेदवार भरत शर्मा गैरे विजय भएका छन् । उनले ५ हजार ८ सय १५ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिव्दन्दी नेकपा एमाले र राष्टिय जनमोर्चा गठबन्धनका टंकबहादुर के.सी.ले ३ हजार ६ सय ६२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
माओबादी केन्द्रबाट मेयर पदका उमेद्वार फमलाल न्युरेले २ हजार ७ सय ४० र नयाँ शक्ति नेपालका बम गुरुङले १ सय १९ मत प्रात्त गरेका छन् । उ
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका रेनुका काउचा मगर ६ हजार ९९ मत प्राप्त गरेर उपमेयरमा निर्वाचित भएकी छिन् । उनले निकटतम प्रतिद्धन्दी नेकपा एमाले जनमोर्चा प्यानलकी रत्नादेबी भण्डारीलाई २ हजार ४ सय २२ मतले पराजीत गरेकी हुन् । भण्डारीले ३ हजार ३ सय ५७ मत प्राप्त गरेकी छन् भने ललिता थापाले २ हजार ८ सय ६० गरेकी छन् ।
गल्कोट नगरपालिकाका ७ वडामा नेपाली काग्रेसले प्यानल जितेको छ । गलकोट नगरपालिकामा वार्ड नं. १ बाट संयुक्त गठबन्धनका नेत्र बुढाथोकी, २ मा नेपाली काँग्रेसका हिम बहादुर भण्डारी, ३ मा विरजंग भण्डारी, ४ मा बलबहादुर खत्री, ५ मा नारायणध्वज मल्ल विजय भएका छन । वार्ड नं ६ मा माओबादी केन्द्रका नरबहादुर खत्री र वार्ड नं. ७ मा सुवेदार टिकाबहादुर थापा विजयी भएका छन् । त्यस्तै वार्ड नं. ८ मा नेपाली काँग्रेसका रामप्रसाद कंडेल, ९ मा तेजबहादुर थापा, १० मा तिलक घर्ती विजय भएका छन । वार्ड नं. ११ मा संयुक्त प्यानलबाट ने.क.पा. एमालेका डम्मर श्रीस विजयी भएका छन् ।
उता काठेखोला गाउपालिकामा भने नेपाली काँग्रसले पराजयको मुख देख्नु परेको छ । काठेखोलामा एमालेका अमरबहादुरथापा प्रमुखमा विजय भएका छन् भने नेपाली काँग्रेसका होमबहादुर हमाल पराजीत बनेका छन् ।
प्रमुखमा एमालृेका थापाले ६ हजार ६ सय ९८ मत ल्याएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिव्दन्दी हमालले ५ हजार २ सय ३१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसैगरी उपप्रमुखमा अर्जुन खत्रीले ६ हजार ५३ मत प्राप्त गरेका थिए भने नेकाकी ज्ञानु श्रीसले ४ हजार ८ सय ३५ मत पाएकी थिईन् ।
जोमसोममा एमालेको विजय -याली
बरेङ गाउपालिकामा जनमोर्चाको जीत !